လူကာကူ (Lukaku )ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေနဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အနိုင်ရပြီးအက်ဖ်အေဖလား ကွာတားဖိုင်နယ်တက်ရောက်
18 Feb 2018 . 2:05 AM
ဟတ်ဒါဖီးလ်အသင်းဟာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့အက်ဖ်အေဖလားအိပ်မက်ကို မဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်က ချန်ပီယံမျှော်လင့်ချက် ဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံးဖလားတစ်လုံးအတွက် အဓိကကစားသမားများစွာကို ပွဲထွက်ခဲ့ပြီး ဒုတိယပိုင်းမှာလည်း ဆန်းချက်ဇ်(Sanchez)၊ မာတာ(Mata) တို့ကို ထည့်ခဲ့ပါတယ်။ ဆန်းချက်ဇ်က လူကာကူ (Lukaku)ဒုတိယဂိုးသွင်းယူနိုင်အောင် (၅၅)မိနစ်မှာ ဂိုးဖန်တီးပေးခဲ့သလို၊ မာတာကလည်း ဂိုးတစ်ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ရုပ်သံအကူဒိုင်စနစ်နဲ့ လူကျွံနေတယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရလို့ နစ်နာခဲ့ရပါတယ်။ ဆန်းချက်ဇ်အတွက်တော့ အက်ဖ်အေဖလား နောက်ဆုံး(၁၆)ပွဲမှာ (၈)ဂိုးသွင်းပြီး ဂိုးဖန်တီး (၈)ကြိမ်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့မှတ်တမ်းကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက် အဖွင့်ဂိုးကို လူကာကူ ပွဲအစ(၃)မိနစ်မှာပဲ သွင်းယူခဲ့လို့ ပွဲက လွယ်ကူသွားခဲ့တာပါပဲ။ ကွင်းလယ်(၃)ယောက်တန်းမှာ ဘယ်ဘက်ခြမ်းထွက်ကစားခဲ့တဲ့ မာတစ်က ခြေစွမ်းပြခဲ့လို့ လူကာကူကလည်း အရင်ပွဲတွေကထက် တိုက်စစ်မှာ ပိုပြီးလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လူကာကူက အက်ဖ်အေဖလားနောက်ဆုံး (၁၀)ပွဲမှာ (၁၀)ဂိုးအထိ သွင်းယူနိုင်ခဲ့တာပါပဲ။
ရှက်ဖီးလ်ဝင်းစ်ဒေး ၀-၀ ဆွမ်ဆီး
၀က်စ်ဘရွန်း ၁-၂ ဆောက်သမ်တန်
ဘရိုက်တန် ၃-၁ ကိုဗင်ထရီ
ဟတ်ဒါဖီးလ် ၀-၂ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်
လူကာကူ (Lukaku )ရဲ့ သှငျးဂိုးတှနေဲ့ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျ အနိုငျရပွီးအကျဖျအဖေလား ကှာတားဖိုငျနယျတကျရောကျ
ဟတျဒါဖီးလျအသငျးဟာ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျရဲ့အကျဖျအဖေလားအိပျမကျကို မဟနျ့တားနိုငျခဲ့ပါဘူး။ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျက ခနျြပီယံမြှျောလငျ့ခကျြ ဖွဈနိုငျခွအေရှိဆုံးဖလားတဈလုံးအတှကျ အဓိကကစားသမားမြားစှာကို ပှဲထှကျခဲ့ပွီး ဒုတိယပိုငျးမှာလညျး ဆနျးခကျြဇျ(Sanchez)၊ မာတာ(Mata) တို့ကို ထညျ့ခဲ့ပါတယျ။ ဆနျးခကျြဇျက လူကာကူ (Lukaku)ဒုတိယဂိုးသှငျးယူနိုငျအောငျ (၅၅)မိနဈမှာ ဂိုးဖနျတီးပေးခဲ့သလို၊ မာတာကလညျး ဂိုးတဈဂိုးသှငျးယူနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ရုပျသံအကူဒိုငျစနဈနဲ့ လူကြှံနတေယျဆိုပွီး ဆုံးဖွတျခဲ့ရလို့ နဈနာခဲ့ရပါတယျ။ ဆနျးခကျြဇျအတှကျတော့ အကျဖျအဖေလား နောကျဆုံး(၁၆)ပှဲမှာ (၈)ဂိုးသှငျးပွီး ဂိုးဖနျတီး (၈)ကွိမျပွုလုပျနိုငျတဲ့မှတျတမျးကို ပိုငျဆိုငျခဲ့ပါတယျ။
မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအတှကျ အဖှငျ့ဂိုးကို လူကာကူ ပှဲအစ(၃)မိနဈမှာပဲ သှငျးယူခဲ့လို့ ပှဲက လှယျကူသှားခဲ့တာပါပဲ။ ကှငျးလယျ(၃)ယောကျတနျးမှာ ဘယျဘကျခွမျးထှကျကစားခဲ့တဲ့ မာတဈက ခွစှေမျးပွခဲ့လို့ လူကာကူကလညျး အရငျပှဲတှကေထကျ တိုကျစဈမှာ ပိုပွီးလှုပျရှားနိုငျခဲ့ပါတယျ။ လူကာကူက အကျဖျအဖေလားနောကျဆုံး (၁၀)ပှဲမှာ (၁၀)ဂိုးအထိ သှငျးယူနိုငျခဲ့တာပါပဲ။
ရှကျဖီးလျဝငျးဈဒေး ဝ-၀ ဆှမျဆီး
ဝကျဈဘရှနျး ၁-၂ ဆောကျသမျတနျ
ဘရိုကျတနျ ၃-၁ ကိုဗငျထရီ
ဟတျဒါဖီးလျ ဝ-၂ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျ
by Ko Kyue . 55 mins ago